Karazana homamiadana miisa telo no mety haterany izay mahafaty avokoa dia ny homamiadan’ny ativava, ny homamiadan’ny avokavoka ary ny homamiadan’ny tatavia. Ho an’ity farany manokana dia vokatr’ilay nicotine miafara any amin’ny tatavia no tena mahatonga azy. Ankoatra izay, mety hiteraka hasemporana ho an’izay mifoka azy ihany koa ny sigara, tsy lazaina intsony ny tsy fahafahan’ny sain’ny olona iray miasa tsara raha vantany vao tsy misy azy. Ho an’ny ONG Ny Saha manokana izay fikambanana iray miady amin’ny fidorohana zava-mahadomelina eto amintsika dia ao anatin’ny ankohonana mihitsy no tena fototry ny olana ka tokony hanaovana fanentanana manokana . Avy amin’ny iraka hampanaovin’ny ray aman-dreny ny ankizy toy ny fanirahana azy ireny mba hividy sigara kely na hampirehitra sigara mantsy no tena mampirongatra ny fidorohana zava-mahadomelina ankehitriny satria heverin’ireo ankizy fa tsara. Ankoatra izay, ny fitarihin’ny namana sy ny zava-mitranga eto amin’ny firenena tahaka izao no tena mampahazo vahana ny fidorohana ihany koa. Raha tokony hianatra ny mpianatra dia mifampitarika amin’ny ratsy fotsiny. Ho azy ireo manokana dia misy hatrany ny fitetezana sekoly hampanaovina ilay sekolin’ny ray aman-dreny entina hanampiana sy hanohanana ireto farany. Tany amin’ny sekoly tsy miankina iray any Analamahitsy no nanohizan’ny Ong ny hetsika omaly nampahafantarana ireo ray aman-dreny ny andraikitra tokony horaisiny sy ny lalana momba ny fidorohana zava-madomelina. Anisan’ny nohazavainy omaly fa voararan’ny lalàna ny fanirahana zaza tsy ampy taona mandeha mividy sigara…. ka tokony hofadiana.